Akụkọ - Otu esi ahọrọ gị ihe nleba anya ikuku kacha mma?
Otu esi ahọrọ gị ihe nleba anya ikuku kacha mma?
Igwe nleba anya ikuku na-agbaji ụzọ abụọ.Anyị ga na-elele ụdị ime ụlọ emebere ka ọ nọdụ n'ime otu ọnụ ụlọ wee na-enye nleba anya n'ihu ikuku dị n'ime oghere ahụ, mana enwerekwa ngwaọrụ mkpanaka emere maka ime ime na n'èzí.Ndị ọkachamara ma ọ bụ ndị nwere ọnọdụ iku ume na-ejikarị ha eme ihe iji nye nyocha ngwa ngwa nke ọnọdụ ikuku ebe ọ bụla ha nọ.
E wezụga nke ahụ, isi ihe dị iche na-agbadata n'ụdị na nha nke ihe nleba anya, ihe ngosi ma ọ bụ njikọ ọ bụla, ngwa ngwa ọ jikọtara na ihe mmetọ na ọnọdụ ọ na-achọpụta.Isi okwu ikpeazụ a dị mkpa karịsịa, ebe ọtụtụ ikuku ikuku na-enyocha ọkwa nke ihe dị mma n'okpuru 2.5 microns (ma ọ bụ PM2.5) na / ma ọ bụ VOCs, ụfọdụ na-aga n'ihu iji nyochaa okpomọkụ, iru mmiri, ihe ndị dị mma (ruo 1 micron). , ma ọ bụ PM1), radon gas, ebu na carbon dioxide.
Ka achọpụtara ihe ndị na-emetọ ihe, ọnụ ahịa ahụ dị elu, mana nke ahụ bụ ọnụ ahịa nwere ike ịba uru ma ọ bụrụ na ị bi na mpaghara nwere ọkwa radon dị elu ma ọ bụ ihe gbasara gburugburu ebe obibi.Nke ahụ na-aga okpukpu abụọ ma ọ bụrụ na gị ma ọ bụ onye òtù ezinụlọ gị na-arịa ọrịa nke ụfọdụ mmetọ nwere ike ịkpalite ma ọ bụ ka njọ.
Oge nzipu: Mee-19-2022